Iintloko ezili-10 zeTV ezenziwe ngeMotion Graphics | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Abanye bethu eli gama lisenokungavakali ngathi liqhelekile kuthi kodwa ndiqinisekile xa ndikuxelela ukuba ngaphezulu kwekhulu lamaxesha ukhe wazama umphumo odumileyo Imifanekiso eshukumayo, ngezihloko ezikwimidlalo kamabonakude nakwimidlalo bhanyabhanya esele sidiniwe kukubona.
Kuyenzeka oko ukusukela ukubonakala kwe- oopopayi beekhompyuter, indlala yethu yeziphumo kunye nokuziqhelanisa nokuzala kubangele ukuba kubekho isizukulwane seengcinga nabaphuphi abaye baba ngabenzi bemilingo ngesoftware kwaye basinika Iziphumo ezilungileyo zentloko kwiimveliso zethu esizithandayo.
1 Yintoni ubuchule beMotion Graphics?
2 Uluhlu lothotho lwenziwe ngesiphumo seMotion Graphics
Yintoni ubuchule beMotion Graphics?
Inkqubo ye-Motion Graphics ibhekisa kwifayile ye- uhlobo lokurekhoda apho ukusetyenziswa kwazo zonke izibonelelo ezazisetyenziswa ngokwesiko ukwenza imveliso akufuneki kwaye endaweni yoko inkqubo yekhompyuter iyalingisa izibane kunye noburhabaxa ukuya kuthi ga kwinqanaba lokunyibilika urekhodo olunezinto ezisisiseko, eyona nto intle kakhulu ngumahluko kuhlahlo-lwabiwo mali olufunekayo kunye nexesha elithathwayo ukufezekisa iziphumo ezinqwenelekayo.
Obu buchule ukusukela oko yaqalwa yaba uloliwe ongathintelekiyo ukuya kwinqanaba lokuthatha "umlingo wemovie”Kuzo iihorizoni ezingazange zibonwe ngaphambili, ukuvumelana kwayo kunye nengqondo yabalawuli kunye nenjongo yemveliso kukuba okwangoku kungabikho ngaphandle komnye, kungenxa yesi sizathu iintloko zoluhlu lweTV ibikho ngoku.
Kodwa asikachazi nantoni na okwangoku kwaye kuya kufuneka uyazi ukuba kunzima ukwenza njalo, ngakumbi okwangoku kulula kakhulu ukuzenza into engekhoyo yokuba oko sikubonayo kwiscreen kuyinyani kwaye kuyinyani kwaye ndikholelwe xa ndikuxelela ukuba namhlanje Abalawuli beefilimu abadumileyo abazithembi ngokupheleleyo iitalente zeekhamera okanye abadlali, Imveliso ngoku ibeka umlingo kwaye luxanduva lwaba bantu ukuqinisekisa ukuba inyani yabo ebonakalayo iyinyani phambi kwamehlo ethu.
Ubuntu obunokuhanjiswa kumabonwakude okanye kwimiboniso bhanyabhanya sele iyinto ebhetyebhetye ngakumbi, ukufika kwale ndlela kunye nokwamkelwa kwayo okungathethekiyo kwihlabathi liphela kuyenzile, yiyo loo nto ngoku sihleli nje sonwabile kwimizuzu embalwa kuthatha umsebenzi omde owenziwe liqela elincinci labantu abahleli phambi kwekhompyuter bekrola yethu ilizwe elibonakalayo apho yonke into intle kwaye ikubambe.
Kuya kufuneka uyazi ukuba ekuqaleni le nto yokuhamba Izinto ze-2D kunye ne-3D Akubonakali ngathi lolona luvo lunokuthenjwa, ubuncinci ngaphandle kokunika umbukeli amava abenza baphuphe kwaye bababambe ngaphandle kokwenza ukuba bazive ngathi batya izinto eziyintsomi kwaye ngaphandle kwento yokuba enyanisweni Obu buchule banamhlanje bufuna ukushiya indawo yayo njengento ehambelana ngokupheleleyo nenyani yethu.
Uluhlu lothotho lwenziwe ngesiphumo seMotion Graphics
Ngoku, kukho uthotho kunye neemovie, kodwa ukukhankanya ezimbalwa apho kukho obu buchule, imveliso yeemovie ezinje:
Narcos (Chris B, Eric N noCarlo B), Marvel (Netflix), Deutschland 83 (Edward B, Samir R), Izinto ezingaqhelekanga (Matt D, Ross D), Umntu onomdla (CBS), uSpy (uSimeon G), Amadoda aphambeneyo (Mattew W, Robin V), umcuphi oyinyani (Nic P), Umdlalo weetrone (David B, Weiss D) okanye ii-overs ezingasekhohlo (Damon L, Tom P).
Okukhona zithandwa kakhulu ezi ngcelele, kokukhona bezithembile ukuba ukuqhubeka kwamabali abo kuyaxhaswa lo bugqi bandisa imida yokucinga. Ayisiyonto incinci ukuba unyaka nonyaka kufike iimveliso zentengiso ezinenkwenkwezi ezivelisa imvakalelo kuthi xa siyibona kwaye inohlobo oluthile lonyango lwedijithali, kuba ezi zinto zihamba kunye kwaye zenza umhlaba weemovie esaziyo namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Izihloko ezili-10 zeTV ezenziwe ngeMotion Graphics
Tonatiuh guerreiro sitsho
Phendula Tonatiuh Guerreiro